Qarax dhimasho badan sababay oo lagu soo dhaweeyay dawladda cusub ee Yemen | Berberanews.com
Home WARARKA Qarax dhimasho badan sababay oo lagu soo dhaweeyay dawladda cusub ee Yemen
Qarax dhimasho badan sababay oo lagu soo dhaweeyay dawladda cusub ee Yemen
Cadan-(Berberanews)-Ugu yaraan 13 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay garoonka Cadan oo ah magaalada labaad ee Yemen iyadoo dowladda cusub ay ka timid Sacuudiga, sida ay sheegeen ilo laga helay ciidamada ammaanka iyo dhaqaatiirta.
Waxaa dhacay ugu yaraan hal qarax iyadoo wasiirradu ay isku diyaarinayeen inay soo degtaan.
Ra`iisul Wasaare Maeen Abdulmalik Saeed ayaa sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirrada “ay badqabaan”.
Wasiirka Warfaafinta Moammer al-Eryani ayaa ku eedeeyay mucaaradka Xuutiyiinta inay ka dambeeyeen waxa uu ugu yeeray “falka argagixiso ee wuxuushnimada ah
Yemen waxaa ragaadiyay dagaal soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2015, markaas oo isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee dalalka Carabta ay bilaabeen howlgal militari oo lagula dagaallamayo Xuutiyiinta laguna soo celinayo xukunka Madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi.
Dagaalka oo ay ku dhinteen in ka badan 110,000; wuxuu horseeday musiibadii bani’aadannimo ee ugu darneyd dunida, iyadoo malaayiin qof ay qarka u fuuleen macluul; dalkana wuxuu u nugleeyay xanuunka safmarka ah ee Covid-19.
Muuqaal laga soo duubay dhacdadii maanta ayaa muujinaya qarax weyn oo ka dhacay garoonka xilli rakaabku ay bilaabeen inay ka soo degaan diyaaraddii golaha wasiirrada cusub keentay Cadan.
Dadkii isugu yimid soo dhoweynta wasiirrada ayaa goobta ka cararay kaddib markii qiiq uu qabsaday garoonka. Dhawaqa rasaasta ayaa la maqlay wax yar kaddib.
Weriyaha wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tebiyay inuu maqlay ugu yaraan labo qarax guud ahaan.
Ma cadda sababta qaraxyada, balse ilo waaxda ammaanka laga helay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in saddex madfac lagu ganay garoonka.
Telefishinka Sacuudiga ee Al-Hadath ayaa dhanka kale baahiyay muuqaal muujinaya madfac ku dhacaya garoonka oo qarxaya.
Bishii August 2019, 36 qof ayaa ku dhintay weerar ay Xuutiyiinta ku qaadeen saldhig milatari oo ku yaalla Cadan.
Goor dambe, Mr Saeed tweetedayaa barta Twitter-ka ku soo qoray: “Annaga iyo xubnaha dowladda waxaan si ku meel gaar ah ugu sugannahay caasimadda ku meel gaarka ah ee Cadan qof walbana wuu badqabaa.
“Ficilkan wuxuushnimada ah ee argagixiso ee lagu beegsaday garoonka Cadan wuxuu qeyb ka yahay dagaalka ka dhanka ah dalka Yemen iyo dadkiisa,” ayuu yir, isagoo aan si toos ah u eedeyn Xuutiyiinta.
“Waxay keliya sii kordhineysaa sida ay nooga go`an tahay gudashada waajibaadkeenna.”
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa si xooggan u cambaareeyay weerarka.
“Waxaan golaha wasiirrada u rajeynayaa awood inay ku wajahaan howlaha culus ee hor yaalla,” ayuu ku yiri warsaxaafadeed uu soo saaray. “Ficilkan aan la aqbali karin wuxuu xusuusin u yahay muhiimadda ay leedahay in Yemen loogu soo celiyo waddada nabadda.”
Golaha cusub ee Mr Saeed ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu dhayayo boogta cadowtinnimada muddada dheer u dhaxaysay ciidamada dowladda uu Sacuudigu taageero iyo maleeshiyaadka daacadda u ah goonni u goosatada Golaha Ku Meel Gaarka ah ee Koofurta (STC), ee uu Imaaraatku taageero.
Labada dhinac ayaa lagu waday inay iska kaashadaan dagaalka sokeeye ee ka dhanka ah Xuutiyiinta oo gacanta ku haya magaalada caasimadda ah ee Sanda iyo inta badan waqooyi-galbeed Yemen.
Balse labadii sano ee ugu dambeysay loollan dhanka awoodda ah ayaa horseeday dhowr dagaal oo dalkaasi ka dhacay.
Bishii August 2019, STC ayaa la wareegtay Cadan waxayna diidday in golaha wasiirrada ay ku laabtaan saldhiggooda ku meel gaarka ah ilaa uu Sacuudigu garwadeen ka noqday heshiis awood qeybsi ah oo ay yeesheen bishii November ee isla sanadkaas.
Heshiiska marna lama dhaqan gelin waxaana bishii April ee sanadkan dhacay dagaal, kaddib markii ay STC ku dhawaaqeen inay ka taliyaan koofurta Yemen.
Goonni u goosatada ayaa ka laabtay go’aankooda saddex bilood kaddib waxayna oggolaadeen in la soo cusbooneysiiyo heshiiska awood qeybsiga kaddib markii ay heleen ballanqaad dhab ah oo ku aaddan inay matalaad siman ku yeelan doonaan xubnaha waqooyi iyo kuwa koofureed ee golaha wasiirada. Labada dhinac ayaa sidoo kale isku raacay in la kala sooco ciidamada ku sugan Cadan
Previous articleMudaharaad lagaga soo horjeedo sixir-bararka oo ka dhacay Laascaanood
Next articleDawladaha Turkiga iyo Britain oo heshiis kala saxeexday